Khubaza firewall kalula alulame uhlelo lwakho kanzima!
Noma exhunywe kwi-Inthanethi liyingozi futhi angagcina ngezinyembezi yekhompyutha yakho. Inani elikhulu of amagciwane nezinye amathonya amabi kungaletha unomphela uhlelo lwakho phansi noma ngisho "ukubulala" ke. Ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukuthi amakhambi kudivayisi yakho isifakiwe: amagciwane futhi lokuvikela. Umsebenzi wabo esibanzi kuzosiza ukuvikela ikhompyutha yakho kanye nolwazi lomuntu siqu olugcinwe ke, kusukela ezingadaleka ebuzwe Inethiwekhi yomhlabajikelele.
I-firewall noma firewall - iqoqo software hardware, okuyinto evimbela amathuba nsada ku izinhlelo zakho kwikhompyutha enonya. Iphinde zivikela kungenzeka hacker ukuhlaselwa. Khubaza firewall kungenzeka, kodwa kungenzeka kuzobangela umonakalo abalulekile ohlelweni lwakho. Phela, ngokuqinisekile kuba khona umuntu ofuna ukufunda amaphasiwedi wakho noma olunye ulwazi lomuntu siqu engasetshenziswa ngoba imisebenzi engekho emthethweni. Kungani izinkinga ezingadingekile?
Omunye umsebenzi obalulekile lokuvikela ukuvimbela ukuthumela izinhlelo ezingafuneki kusuka kwikhompyutha yakho. Lokhu kufanele futhi enze uyeke ngenhloso ukukhubaza firewall, ikakhulu ngoba usebenza cishe bengabonakali umsebenzisi elula futhi cishe akukho nomthelela ijubane ikhompyutha yakho.
Firewall - isofthiwe Kulula kakhulu ukufaka futhi ulungiselele. Zonke izinqubo ezenzakalelayo kuwo. Vele ukunikeza imvume izinsiza ezithile noma izinhlelo. Ngaphezu kwalokho, ungase uvimbele firewall XP futhi esikhundleni ukusungula uhlelo olunzulu ehlanganisa amagciwane futhi lokuvikela. Imakethe manje olunikezwa inqwaba isofthiwe efanayo, ngakho une ongakhetha kuzo. Into esemqoka okufanele ukuba unake lapho ekhetha firewall, kungcono ukuthi kungenzeka zokuhlunga abanekhono traffic namakholi angenayo naphumayo.
Kuhle kokusho ukuthi iningi lalezi zindlela zokusebenza nakanjani free, futhi zinikeza izinga eyanele yokuvikela, ngezinye izikhathi akuyona okubi kakhulu ukwedlula nozakwabo ikhokhwe. Kodwa uma zonke izizathu ngenhla musa likuthinta kanjani ukuzimisela yakho ukuvala firewall, bese ngezansi uzofunda indlela yokukwenza.
Khubaza firewall kukhompyutha yakho ne okusebenza umndeni ka-Microsoft silula. Kwanele ukungena "Control Panel" futhi uthole ithebhu okuthiwa "Security Center" (i-Windows XP) noma "System nokuphepha" (-Windows 7). Okulandelayo, kumele uye Windows firewall bese uchofoza inkinobho yesinxele ku ibhokisi elifanele eduze kwegama "Khubaza". Manje lokuvikela likhubaziwe, futhi ikhompyutha yakho usengozini.
khumbula nje ukuvala firewall kulula, kodwa ukubuyisela ohlelweni noma idatha ku-hard drive yakho, ngesinye isikhathi kunzima kakhulu. Ngakho qiniseka ukuthi uhlole "kochwepheshe" futhi "nebubi" ngaphambi kokwenza izinqumo ezinjalo. Isifiso ukusheshisa futhi lula inqubo ukusebenza computer ekhaya ngezinye izikhathi kuholela ezenzweni ezingalungile.
Imfashini isikhafu ukunitha ukukhilosha LICs